नेपाल आज | श्रीमतिको योजनामा माओवादी नेताको गोली हानी हत्या !
श्रीमतिको योजनामा माओवादी नेताको गोली हानी हत्या !
करिव एक महिना अघि कपिलवस्तुका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीपक पाण्डेयको हत्यामा उनकै श्रीमतीको महिमाको योजनामा भएको प्रहरीले निस्कर्ष निकालेको छ ।
पाण्डेयलाई गत जेठ ५ गते राति तौलिहवा–जितपुर सडक खण्डको गोबरीमा मोटरसाइकलमा आएका तीनजनाले गोली हानेका थिए भने तीन दिनपछि उपचारको क्रममा काठमाडौंमा मृत्यु भएको थियो ।
प्रहरीले घट्नाको अनुसन्धानपछि मुख्य योजनाकार उनकै श्रीमती महिमासहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ओमप्रकाश यादव, रमजान साह मुसलमान, साकिर अलि पखियासहित गोली हान्ने र हतियार विक्रि गर्नेसहित ११ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त घट्नाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले डिएसपी धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा टोली खटाएको थियो ।
आफनै पतिलाई मार्ने योजना वनाउने महिमाले यो योजना किन वनाईन भन्ने विषय भने अझै खुलेको छैन । उनीहरुविरुद्ध हातहतियार खरखजाना, ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको कपिलवस्तुका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘मेडिक माफिया’ सुनिल शर्माले धरानको बिपी प्रतिष्ठान डुबाए